Two Years Later, We Look Toward What’s Possible - McKnight Foundation
Labo sano ayaa laga joogaa markii Mr. George Floyd la dilay. Sida dad badan oo Madaw ah oo Maraykan ah taariikhda oo dhan, wuxuu Minnesota u yimid fursad. Haddana halkii laga xaqiijin lahaa Riyada Maraykanka, waxa soo baxay waxay ahayd riyo xun.
Wixii ku dhacay Mr. Floyd maaha wax aan caadi ahayn. Sheekadiisu waxa ay muujinaysaa dabeecadda qalafsan ee cunsuriyadda-sida ay uga muuqato awood xad-dhaaf ah oo heer shakhsi ah, iyo sida ay uga soo baxdo hab dhaawac ah oo si macmal ah u meeleeya qiimaha bini'aadamka oo dhiirigeliya falalka rabshadaha wata ee nacaybka, sida aan ku aragnay Buffalo bishan. Iyada oo ay jirto masiibo beddeshay habka nolosheenna oo dhan, Mr. Floyd dhimashadiisu waxay kicisay xisaabin isir caalami ah. Kacdoonadii Minneapolis iyo St. Paul ayaa ka dhashay burbur soo gaaray xaafado, xitaa maanta, la tacaalaya sidii ay uga soo kaban lahaayeen.
McKnight, waxaanu waydiinay nafteena sida ugu wanaagsan ee aan u sharfi karno Mr. Floyd noloshiisa iyo dhaqdhaqaaqii ka dambeeyay. Bishii Maajo 2020, Magaalooyinka Mataanaha ah waxay noqdeen xudunta cadaalad darada jinsiyadeed ee qaranka, haddana waxaan ognahay in kala duwanaanshuhu uusan ka bilaaban ama uusan dhamaanin George Floyd. Minnesota waxa ay leedahay qaar ka mid ah farqiga hantida jinsiyadeed ee ugu madax adag dalka. Markay dhibaatada cimiladu sii korodho, Bulshooyinka Madaw, Asaliga ah, iyo dadka midabka leh (BIPOC) ayaa si aan qiyam lahayn u qaadaya culayska.
Waxaasoo dhan kuma dhacaan shil. Waxay u dhacdaa sababtoo ah maanaan is-weyddiin—aragtiyadayada, eexdayada, aragtidayada, iyo siyaasadahayada iyo dhaqamadayada. Haddaba sideen ku bilaabeynaa inaan furfurno nidaamyada cunsuriyadda iyo caqabadaha ku duugan ee ay dad badani la kulmaan maalin kasta? Sideen u abuuri karnaa Minnesota guri ahaan dhammaan-oo leh sinnaanta jinsiyadda, fursada dhaqaale, iyo xasiloonida cimilada udub dhexaad u ah -kadibna u soo dir calaamadaas aduunka?
Isbahaysiga GroundBreak: Dib-u-qorista Xeerarka si loo Abuuro Fursad Isir
Sannadkii hore, I ayaa soo saaray martiqaad si loo abuuro Minnesota oo uu George Floyd u qalmo. Waxaan waydiinay bulshooyinka inay qiyaasaan sida uu u ekaan doono mustaqbalka firfircoon. Waxay isugu yimaadeen habab aan hore loo arag—iyaga oo ka shaqaynaya dhaawacooda iyo khasaaradooda si ay si wada jir ah u saadaaliyaan mustaqbal sinaan ah oo ay noo sheegaan waxa ay qaadan doonto si loo gaaro cadaalad.
Laakin aan run noqono: beelahani waxay noo sheegeen waxa ay qaadan doonto muddo dheer.
Waxay rabaan inay helaan qalab lacageed iyo raasamaal si ay u bilaabaan oo dib u dhistaan ganacsigooda, u iibsadaan guryo, oo ay ubadkooda iyo ay awoowaha u yihiin u siiyaan nolol wanaagsan. Dhibaatada? Capital uma aysan shaqayn bulshooyinka BIPOC. Sinnaan la'aanta lacaguhu waa caqabad joogto ah, anaguna ka gobol ahaan wali maynaan baran sidii lacagtu si degdeg ah iyo sinnaanba u socon lahayd si loo awoodo aragtida bulshooyinkayada, taasina waxay u baahan tahay in wax laga beddelo.
May 12, Waxaan bilownay Isbaheysiga GroundBreak, koox ka kooban 25 (iyo koraya) shirkado, bulsho, iyo hogaamiyaal samafalayaal ah oo ay ka go'an tahay inay muujiyaan in, iyadoo la haysto ilo ku filan, mustaqbalka sinnaanta jinsiyadeed iyo kaarboon-dhexdhexaad ah ay suurtagal tahay hadda-marka hore Minneapolis-St. Paul, ka dibna qaranka oo dhan.
Si wada jir ah, waxaan hiigsaneynaa in aan dhaqaajino ugu yaraan $2 bilyan doolar dabacsan muddo 10 sano ah, anagoo geyneyno raasamaal afar meelood: lahaanshaha guri, guri kiro, horumarin ganacsi, iyo ganacsi BIPOC. Minnesota waxa ay hore u xalisay caqabado adag, laakiin markan waa in aan la samaynaa qof kasta oo qolka ku jira, qof kasta oo kursi ku leh miiska. Kaliya markaas ayaan bilaabi karnaa inaan xirno farqiga hantida jinsiyadeed, anagoo hubinayna barwaaqada Minneapolis-Saint Paul iyo gobolka.
Isbaheysiga GroundBreak ma aha sanduuq; waxay ku saabsan tahay isbeddel aasaasi ah. Waxay ku saabsan tahay in la helo lacag si aad dhaqso ugu dhaqaaqdo oo aad si kale u guurto, haa. Laakiin sidoo kale waxay ku saabsan tahay samaynta qoto dheer, shaqada dheer ee khalkhalgelinta xaaladda hadda taagan, daah-furka siyaasadaha iyo eexda ku duugan nidaamyadayada wadajirka ah, iyo xidhitaanka galdaloolooyinka hantida jinsiyadeed ee muddada dheer jiray. Ma aha xabbad qalin ah, laakiin waa tallaabo loo qaaday xagga dhisidda ballan-qaadka iyo "ficil-ma-aha-ereyo" ee hay'adaha iyo dadka saamaynta leh ee diyaarka u ah inay wax u qabtaan si ka duwan.
"GroundBreak ma ahan sanduuq; Waxay ku saabsan tahay isbeddel aasaasi ah… Waxay ku saabsan tahay samaynta qoto dheer, shaqada dheer ee carqaladaynta xaaladda hadda taagan, daah-furka siyaasadaha iyo eexda ku duugan nidaamyadayada wadajirka ah, iyo xidhitaanka goldaloolooyinka hantida jinsiyadeed ee muddada dheer jiray."
Dib u dhiska Minnesota Dhammaanteen Mudannahay
Waxa aanu ku leenahay dhaxalka Mr. George Floyd in uu dib uga dhigo magaalooyinka mataanaha ah xudunta u ah fursada isir-simiga. Ka yeeli mayno wixii ina soo maray, laakiin nalama qeexi doono. Shaqadeenu hadda waa in aan gobolkayaga ka dhigno oo aan sheegno meel uu George Floyd ku horumari lahaa. Warka wanaagsani waa, waxaan haysanaa agabkii, hoggaankii, iyo kartidii saxda ahayd ee aan ku qaban karno.
Indhaha adduunku innagoo eegayna, waa inaynu xusuusannaa in shaqadan-cadaalad, sinnaan, fursad-aynu ahayn wax midkeen kaligiis qaban karo. Waxay qaadan doontaa rabitaankeena wadajirka ah, aqoonteena, iyo mala-awaalkeena si aan uga gudubno masiibada una gudubno isbedel. Waxayna u baahan doontaa inaan bedelno, inaan la halgamno dhaqankeenna, inaan qaadno hab cusub iyo mustaqbal cusub oo aan dhammaanteen rabno oo mudanno.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad nagu soo biirto horumarinta dowlad sinaan ah. Tani waa daqiiqad aan ku leexin lahayn muruqayada madaniga ah, oo aan gacmaha is qabsano bulshooyinkayada, oo aan ka dhigno riyooyinkeena ugu macquulsan, ee Minnesota iyo qarankeena. Mustaqbalku ma dhammaan - hadda waanu bilownay.